सडक, हामी र ‘हुलुश’ ~ brazesh
सडक, हामी र ‘हुलुश’
December 04, 2011 नेपाली, बायाँ फन्को, बायाँ फन्को-नेपालबाट No comments
बायाँ फन्को ७२
केही दिन अघिको कुरो हो । हुन त यो र यससंग मिल्दा जुल्दा प्रसंगहरु आजकलको बेला बखतमा साह्रै नौलो कुरा त होइन । तर पनि हामीले सहज रुपमा पचाइसकेका कुराहरुका पछाडि पनि केही सोच्नु पर्ने पक्षहरु हुन्छन् । केही कुराहरु यस्ता हुन्छन् जसलाई साधारण मानेर बेवास्ता गर्दै जाँदा पछि गएर त्यसले हाम्रो आचरण, व्यवहार र मानसिकतामा नै कुनै गम्भीर प्रभाव छोडिसकेको हुन सक्छ । त्यतिखेर त्यसलाई सुधार्न, छोड्न र परिमार्जन गर्न कठीन हुन सक्छ ।
काम विशेषले बिहानै हाँडी गाउँ तिर पुग्नु परेको हुनाले त्यस दिन काठमाण्डौंको चीसोलाई चुनौती दिंदै यो स्तम्भकार सखारै गुँडको न्यानो छोडेर निस्केको थियो । बिहान आठै बजे भन्दा अघिको समय भएकोले काठमाण्डौंको छिचोलिनसक्नुको ट्राफिकको कोपभाजनबाट बच्न सकिन्छ भन्ने सोच थियो । त्यसैले चीसो खाए पनि भीडभाड र अन्य सवारीसाधनका पेलाइबाट छलिंदै कालिकास्थानबाट डिल्लीबजार हुँदै त्यहाँबाट चारखाल तिर मोडिएर जान खोज्दा पहिलेदेखि नै त्यहाँ अस्वाभाविक अवस्थामा ट्राफिक जाम भएको देखियो । दुई पाङ्ग्रे ुवारी साधनमा भएका कारण अलिअलि अघि बढ्न सम्भव भएर चारखालको मोडमा पुगे पछि भने गतिमा पूर्ण विराम नै लाग्यो । त्यहाँको सम्पूर्ण आवागमन ठप्प हुनुको पछाडि एउटा धार्मिक ¥याली कारक तत्व बनिरहेको थियो । चारखाल तिरबाट असंख्य मानिसहरु एक धर्मगुरुको फोटो र उनका अमरवाणीहरु लेखिएका प्लाकार्डहरु लिएर लामवद्ध भएर आइरहेका थिए । उनीहरु पुतलीसडक तिर झर्दै थिए । केटाकेटी, तरुनातरुनी र वृद्धवृद्धाहरु सबै समान रुपमा त्यस ¥यालीमा सहभागी थिए । कोही भजनकीर्तन गर्दै थिए, कोही नारा लगाइरहेका थिए भने कोही नाचगान पनि गर्दै थिए । आस्था कसैको कुनै पनि हुन सक्छ, त्यस आस्थामाथि आफ्नो आस्था भए पनि नभए पनि अरुको आस्थाको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने यो स्तम्भकारको सँधै मान्यता रहआएको छ । उताबाट आएर त्यो लाम पुतलीसडक तिर अनवरत झरिरहँदा न त त्यता जाने सवारीसाधनहरु छिर्न पाएका थिए, न त उतातिर जाने । निकै बेर भइसकेकपछि पनि लाम सकिने कुनै संकेत नै थिएन । त्यस अवस्थामा अब पछाडि डिल्लीवजार पीपलबोट, मैतीदेवीको चोक, पुल हुँदै बानेश्वरसम्म सवारी साधनहरु अलपत्र पर्न थालिसकेका थिए । त्यो भन्दा पारी के भएको होला भन्ने अनुमान लगाउन कुनै गाह्रो कुरा थिएन । एकै छिन त्यो लामलाई रोकेर ती सवारीसाधनहरुलाई जान दिने हो भने स्थिति निकै सहज हुन सक्थ्यो । छेवैमा उभिएका ट्राफिक प्रहरी भने उल्टै हर्न बजाइरहेका सवारी साधनहरुलाई रोक्ने ईशारा गर्दै जुलुसलाई पठाइरहेका थिए ।
त्यो पछाडिको जाममा अफीस समयमा पुग्न नपाउने मानिसहरु पनि अड्केका थिए, छोराछोरीलाई स्कूल पु¥याउन हतारिएका अभिभावकहरु पनि थिए । अलि पछाडि कुनै विरामी बोकेको एम्बुलेन्स पनि टिठ लाग्दो गरी कराइरहेको क्षीण आवाज पनि नसुनिएको होइन । लाममा आइरहेका मानिसहरु भने बर्खे भेलमा उर्लिएको खोलाको पानी जस्तो अविच्छिन्न, अनवरत र निरन्तर आइ नै रहेका थिए । निकै बेर पछि अलिकति खालि हुन लागेको जस्तो देखेर त्यस्तै कुनै हतार भएको मोटरसाइकल छिर्न खोज्यो । त्यति हुन सक्यो भने अर्को तिर खालि र सुनसान भैसकेको बाटोमा ऊ हुईँकिन पाउँथ्यो । तर उसलाई ¥याली अनुगमन गरिरहेका मध्ये एकजनाले झम्टेर रोक्यो ।
‘एक छिन कुर्न सक्नुहुन्न तपाईं ? तपाईंलाई मात्रै हतार छ ?’ ऊ बम्क्यो ।
आफ्नो आस्थाको लागि ¥यालीमा हिंड्नु र हिंडाउनु जति ती आयोजकहरुको अधिकार हो, मूलसडकमा निर्वाध आवागमन गर्न पाउनु अरुको पनि अधिकार हो । आफ्नो छोराछोरीलाई समयमा स्कूल पु¥याउन पाउनु, आफू समयमा कार्यालयमा जान पाउनु, विरामीलाई समयमा अस्पताल पु¥याउन पाउनु, भनेको ठाममा निश्चित समयमा पुग्न पाउनु अरु मानिसका पनि अधिकारको कुरा हो । तर आस्थाको त्यो ¥यालीले अरु धेरै मान्छेका अधिकारहरु हनन गरिरहेको थियो । एकै छिन रोकेर अरुलाई जान दिए हुन्थ्यो भन्ने यस स्तम्भकारको अनुरोध पनि उनीहरुले सुनेनन् । हतार कै कुरा गर्ने हो भने ¥यालीलाई बरु आधाघण्टा ढीला भएर केही फरक नपर्नु पर्ने हो । तर होइन, त्यो नसकिउन्जेल कोही चुइँक्क पनि बोल्न पाएन । झण्डै आधाघण्टाको त्यो विशाल लाम सकिएपछि मात्र बाटो सर्वसाधारणका लागि खुल्यो । भनिरहनु नपर्ला त्यतिन्जेल सम्म पछाडि थुप्रेका सवारीसाधनहरुका कारण त्यो बाटो र त्यससंग जोडिएका अरु बाटोहरुको अस्तव्यस्ततालाई पन्छाउन कति समय लाग्यो होला ?
यसै पनि सडक, तिनका लम्बाइ र चौडाइले थेग्नै नसक्ने गरी राजधानीमा सवारीचाप छ । निर्वाध रुपमा कुनै एक ठाममा गाडी गुड्न नपाउनासाथ सिंगै काठमाण्डांैको ट्राफिक अस्तव्यस्त हुन्छ । तर पनि दिनहुँ हामी केही न केही बहानामा सडक ढाकेर यस्तै केही न केही गरिरहेका हुन्छौं । कहिले धर्मको नाममा, कहिले राजनीतिको नाममा, कहिले कुनै जायज वा नाजायज विरोधका लागि, कहिले केही सफलताको खुसियालीमा, कहिले असफलताको दुःखमा र कहिले बिहेको उत्सवमा हामी सडकहरु अवरुद्ध पारिरहेका हुन्छौं, जुलुशको नाममा ‘हुलुश’हरु निकालिरहेका हुन्छौं । आफ्नो काम नसकिउन्जेल हामी अर्काको लागि कुनै महत्व दिंदैनौं । आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकारको हनन नहोस् भन्ने हामी कहिले पनि किन सोच्दैनौं ? ‘हुलुस’ र ¥याली मात्र होइन, सवारी चलाउँदा पनि आफू फसिन्छ भन्ने लाग्यो भने पछाडि आएका एम्बुलेन्सका लागि समेत छेउ नलाग्ने संस्कार हामीमा विकसित भएको छ । पेटीमाथि चढाएर मोटरसाइकल हुइंक्याउने, पेटी नभएका सडकमा दुई तीन जना हिंड्दा अघिपछि नभएर दायाँ वायाँ भएर हिंड्ने, पछाडिबाट कसैले हर्न बजायो भने त्यसैलाई उल्टो आँखा तर्ने, केही बोल्यो भने त्यसलाई ‘फलान्थोक’को उपाधिले विभूषित गर्ने र दोहोरो बोल्नेको बंगारा झार्न खोज्ने प्रवृत्ति हामीले अहिले नै त्याग्न सक्नुपर्छ ।
हुन त सार्वजनिक सवारी आवागमनमा अवरोध हुने गरी ‘हुलुश’ निकाल्न पाइँदैन भन्ने नियमकानून कतै उपेक्षित रुपमा लेखाइमा मात्र कुँजिएर नबसेको त छैन क्यार । तर आचरण र सोचले साथ नदिने हो भने नियम र कानूनका कुनै अर्थ हुँदैन । कडाइका साथ, बल प्रयोग गरेर अनुशासनमा ल्याउने भनेको विवेकहीन जनावरलाई हो, विवेक भएको मानिस भन्ने प्राणीलाई होइन । हामी मानिस हौं, हामीमा विवेक छ भन्ने कुरा हामीले नै प्रमाणित गरेर देखाउनु पर्छ । त्यो पनि कुराले होइन, कामले ।